kianja - ewa.mg
Kianja synthetique By-pass: efa mametraka ilay “tapis” ny orinasa RMH
Mandroso ary efa misasaka ny asa fanamboarana ilay kianja vaovao, taranja baolina kitra, eto Antananarivo, apetraka eny amin’ny By-Pass. Tompon-kevitra sy vy nahitana izany ny mpitantana eo anivon’ny klioba Elgeco Plus. Vinavina ho raitra sy manara-penitra ilay kianja ary mifanakaiky amin’ireny any Eoropa ireny izy ity. Raha ny fandaharam-potoana, masahin’ny orinasa RMH mpikarakara aloha izao ny fanamboarana ny “pelouse” vao hiditra amin’ny “gradin” sy ny “tribune” izy ireo. Manana traikefa amin’izany ity orinasa nampiandraiketina azy ity. Nahazo fankatoavana avy amin’ny Fifa sy ny Caf izy ireo amin’ny fanatanterahana izany asa izany. Efa roa volana teo izay ny naharetan’ny fanamboarana. Nambaran’ny injeniera fa nanano sarotra kely ny teo amin’ny «plate-forme drainante», nahataraiky ny asa. Betsaka mantsy ireo pitsopitsony tsy maintsy notandremana mba hifanaraka tsara amin’ny fenitra iraisam-pirenena, mialoha ny nametrahana ilay “tapis”. Ahitana «piste à 3 couloirs» eo aminy sady koa toeram-pilalaovana mirefy 68 m x 105 m. Raha mizotra tsara ny asa, ho vita eo amin’ny efatra eo herinandro izany. Tompondaka